Home Wararka Dhulgariir fudud oo laga dareemay deegaanka Boorame
Dhulgariir fudud oo laga dareemay deegaanka Boorame
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Boorama Dhul-gariir fudud ayaa laga dareemay gabi ahaanba magaalada Boorame ee deeganada ku dhaw, kaasi oo sameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay dareemeen cabsi iyo walwal la xiriira dhul-gariirkaas. Waxa la sheegayaa in dad badan ay xalay ka baxeen guryahooda waaguna ugu baryay baanka. Waxaana xusid mudan in Dhul-gariirkii xalay ku dhuftay magaalada Boorama laga dareemay deegaanada ka agdhow magaaladaasi. Ilaa iyo hada lama oga inuu jiro khasaare ka dhashay Dhul-Gariirka. Dhanka kale ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland.